Resin’i Madagasikara tamin’ny isa 21 noho 19 i Egypta tamin’ny lalao famaranana ny taranja basikety 3x3 sokajy lehilahy, natao omaly tao Rabat-Maroc. Voahosotra ho tompondakan’i Afrika i Madagasikara. Resintsika avokoa ireo lazaina ho sangany aty Afrika amin'ity taranja basikety ity, toa an'i Angola, Mali ary Egypta. (Jereo Sary Tohiny)
Andron’ny medaly ho an’i Madagasikara ny omaly alahady 25 aogositra 2019. Medaly fito no azon’ny Atleta malagasy, ka volamena ny enina, azo tamin’ny taranja basikety 3x3 lehilahy ny iray, ary tamin’ny fibatana fonjam-by ny volamena dimy hafa. Niampy medaly volafotsy iray teo amin'ny fibatana fonjam-by. Hitohy hatramin’ny 31 aogositra 2019 ity Lalao afrikanina andiany faha-12 tanterahina any Rabat-Maroc ity.
Régis Randrianantenaina: "Nisy kolikoly avo lenta" iny fifidianana filohan'ny FMF iny
Nanambara tao anaty horonan-tsary vidéo i Régis Randrianantenaina, filohan'ny ligin'ny baolina kitra Atsimo Andrefana, "tsy nadio" iny fifidianana filohan'ny federasiona Malagasy amin'ny baolina kitra FMF) natao tany Ifaty-Toliara ny sabotsy 24 aogositra 2019. "Nisy kolikoly avo lenta", hoy hatrany izy nanohy ny fanazavany, ary nokianiny ny fihetsik'ireo filohan'ny ligy namany tamin'iny fifidianana natao tany Ifaty iny. Nanambara i Régis Randrianantenaina fa hiala tsy ho filohan'ny ligin'ny baolina kitra Atsimo Andrefana raha ankatoavin'ireo mpiara-miasa aminy.
Nirava ady sahala 1 noho 1 ny Fosa Junior FC sy ny Pamplemousse tamin'ny lalao miverina dingana savaranonando amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ny ekipa tompondaka, natao androany tatsy amin'ny nosy Maorisy. Ampy iakaran'ny Fosa Junior amin'ny dingana manaraka ny vokatra azony androany tatsy Maorisy. Efa nandresy 1 noho 0 mantsy ny Fosa tamin'ny lalao mandroso. Ny klioba TP Mazembe avy any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo no hifandona amin'ny Fosa Junior FC amin'ny dingana faharoa.
Taorian’ny fihodinana faharoa vao voafidy ny filoha vaovao hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF), rehefa tsy nisy nahazo ny an-tsasamanila ireo kandida miisa dimy nifaninana tamin’ny fihodinana voalohany. Tamin’ireo kandida niisa dimy nifaninana tamin’ny fihodinana voalohany, dia nahazo vato 9 i Arizaka Rabekoto Raoul Romain, 7 ny vato azon-dRasoamaromaka Herilalaniaina, 6 ny an-dRakotomamonjy Neypatraiky André ; tsy nisy nahazo vato kosa ny kandida isany Mohamad Abdilah Aboudou sy Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy. Ireo filohan’ny ligim-paritry ny baolina kitra miisa 22 no mpifidy. Nahazo isam-bato 15 i Arizaka Rabekoto Raoul Romain, raha 7 kosa no azon’i Rasoamaromaka Herilalaniaina, mpifaninana taminy tamin’ny fihodinana faharoa.
Tanterahina ao Ifaty-Toliara anio 24 aogositra 2019 ny fifidianana izay ho filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra. Miisa dimy ireo kandida mifaninana, dia Arizaka Rabekoto Raoul Romain, Mohamad Abdilah Aboudou, Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy, Rasoamaromaka Herilalaniaina ary Rakotomamonjy Neypatraiky André. Izay voafidy eo no handimby ny toeran’i Ahmad, izay voafidy ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF). Ny Comité de Normalisation pour la Fédération Malagasy de Football no napetraky ny federasiona iraisam-pirenena hitantana vonjimaika ny rafitry ny baolina kitra malagasy nanomboka tamin’ny novambra 2018, rehefa tsy nety tontosa ny fifidianana filohan’ny FMF nokarakarain’ny vaomiera mahaleotena teo aloha. Miara-tontosaina amin’ity anio ity koa ny fifidianana ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny Federasiona malagasy ny baolina kitra.
Nanao tatitra sy nanazava ireo zava-bitany andriamatoa Nicolas Dupuis io maraina io teny amin'ny Carlton Anosy. Efa fahombiazana lehibe hoy izy iny vokatra farany teo iny ary tsy nampitsanga-menatra ny Malagasy tsivakivolo. Maro anefa ny ezaka mbola ho arenina, ary nilaza izy fa hisy ny fitsongàna ireo mpilalao manerana ny nosy hoan'ny fifanitsanana manaraka eo. Misy ny fotodrafitr'asa izay nampanantenain'ny fitondram-panjakana dia ny fananganana sy fanavaozana ny kianja filalaovam-baolina, ary ihany koa sekoly mpamolavola eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. (Jereo Sary Tohiny)
Abha Club, io indray no klioba vaovao hilalaovan’i Andriatsima Faneva Imà, kapitenin’ny Barea. Efa ofisialy ny fifindrany any amin’ity klioba mivoatra amin’ny diviziona voalohany any Arabia Saodita, efa vita ny fifanaraham-piaraha-miasa. Niala tany Frantsa izany i Andriatsima Faneva Imà, firenena nilàny ravinahitra nanomboka tamin’ny 2008, ka nifandimbiasany nilalao tamin’ny klioban’ny FC Nantes, Sochaux ary Clermont Foot 63. Samy milalao any Arabia Saodita izany izao i Andriatsima Faneva Imà sy Carolus Andrea, ity farany izay milalao ao amin’ny Al-Adalh FC.
Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fenitra takian'ny FIFA ity « Stadium » Barikadimy eto Toamasina ity. Azo andraisana ireo lalao iraisam-pirenena sy olimpika, mahazaka mpijery 15 000. Hisy « piste tartan » fihazakazahana ny manodidina ny kianja. Vita ny 98% amin'ny asa. Natao androany alakamisy 15 aogositra 2019 ny fandraisana ara-teknika vonjimaika ny asa. Tonga teto an-toerana ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto. « Dingana lehibe no nahivatana an'izao asa izao »,hoy ny Minisitra satria « efa folo taona no namelana azy teo, nefa dia nezahina novitaina tato anatin'ny fotoana fohy ». Miantso ny rehetra ho saropiaro amin'ny zava-bita toy izao ny Minisitra mba ho lovain'ny taranaka faramandimby. (Jereo sary Tohiny)